အာသာပြေ ( အဒေါ် နဲ့ တူလေး ): March 2016
အာသာပြေ ( အဒေါ် နဲ့ တူလေး )
တကယ့်အဖြစ်အပျက် နှင့် စာပေများ ကြုံဆုံဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးခဲ့သည်များ ကိုယ်တွေ့များစုစည်းထားပါသည် ။
မိသားစု သွေးသားရင်း များပါဝင်သဖြင့် မနှစ်သက်ပါက ဆက်လက်ဖတ်ရှူခြင်းမပြုပါရန် အချို့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်များကို ဖေါ်ပြရာမှာ အမေ အဒေါ် စသည့် ဇာတ်လမ်းများပါ ပါဝင်ပါသည် ။
ခယ်မ နဲ့ လီးတင်ပွဲ
အဒေါ် ရဲ့ အကူအညီ
ကွန်တော် အမေ့ကို သနားသွားသည် ဘာလို့ဆိုဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနေတဲ့အဒေါ်နဲ့ ပထွေးကို မြင်လိုက်ရလို့ဖြစ်သည် ပထွေးက အဒေါ်ယောက်င်္ကျား သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်သည် အခုတော့ သူငယ်ချင်းမိန်းမလဲ အလွတ်မပေး တအင်းအင်း တအွတ်အွတ်ကြတ်အော်သံကြားလို့ အသာကြည့်တော့ ပထွေးက သူ့လီးကို အဒေါ်ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်နေသည် လီးကြီးကနည်းတာမဟုတ် တကယ်ကိုထွားသည် ဒါကြောင့်အမေ မခံနိုင်တာဖြစ်မည် ကျနော်ကအဲ့လောက်မထွားပေမဲ့ တကယ့်တန်းဝင်လီးဆိုတာ ကျနော်ပဲသိသည် အဒေါ်လီးစုတ်နေတာကို ပုံခိုးရိုက်ထားလိုက်သည် အံသြနေပုံလဲရသည် ခုနေများ သူ့သားသာမြင်လို့ကတော့ ဘယ်လိုနေမည်မသိ အတော်ကြာစုပ်ပေးပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတော့ ပြီးသွားသည် ပြီးတာနဲ့ ပထွေးက ထထွက်ဖို့ပြင်တော့ အဒေါ်က မော့ကြည့်သည် အလိုးခံခံချင်နေပုံရသည် Posted by
အန်တီ ချို နဲ့ အမေ အိမ်ထောင်ပြုတာ နောက်ကျပေမဲ့ အရွယ်တင်တဲ့ ကျနော့် အဒေါ်
အမေ့ ထက် ၁ နှစ်ပဲ ငယ်သလို တောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံး တင်းထွားတဲ့ နို့လုံးကြီးတွေ အပြင် ထွားလုံးတင်းကားနေတဲ့ ဖင်အိုး တုတ်ခိုင်တဲ့ပေါင်တံ စသည်တို့ဖြင့် တဖက်သားမြင်ရုံနဲ့ လီးတောင်စေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး ဝပေမဲ့ သူဟာနဲ့သူက အနေတော် အနေအေးပြီး ဘာသာရေးကို အလေးထား သူ အပြောအဆို ပွင့်လင်းသလို လူကြီး လူငယ်မရွေးနဲ့ အဆင်ပြေစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတက်သူ
ကျနော် နဲ့ ရွယ်တူသားတစ်ယောက်ရှိပြီး ကျနော်ကိုပါ သားအရင်းလိုသဘောထားပြီး အတူနေ တူစား အတူအိပ် အစစအရာရာ တာဝန်ယူခဲ့သူ သူ့ယောက်င်္ကျားက ဟိုင်းဝေးကုန်ကားမောင်းပြီး မိသားစုကို အဆင်ပြေပြေနေထိုင်စားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူ ငယ်စဉ်ထဲက အတူအိပ် အတူနေလာခဲ့တဲ့အဒေါ် သူသား နဲ့ မအိပ်ခင် အဒေါ် နို့အပြိုင်လုပြီး အိပ်ယာတခုလုံး ဝုန်းဒိုင်းကျဲပြီး ဆော့နေကျ ဒေါ်လေးက ဝတော့ ဖက်လို့ ခွလို့ ကောင်းသလို ဒေါ်လေးပေါင်လုံးကြီးတွေကြားဝင်ပြီး ပေါင်လုံးခေါင်းအုံးကာ အိပ်ခဲ့ဖူးခဲ့သည် ၉ တန်းရောက်တော့ ဒေါ်လေးသားက ဘော်ဒါဆောင်ပြောင်းထားတော့ အိမ်မှာ ကျနော် သာကျန်ခဲ့သည် လူကကလေးစိတ်မကုန်သေးပေမဲ့ သဘာဝကဒီတိုင်းမနေ လမွေးစစပေါက်လာကထဲက စိတ်က တမျိုးပြောင်းလာတက်ပြီ ဂွင်းထုတက်လာပြီ အတူနေဒေါ်လေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို
အဝတ်မပါ မြင်တွေ့ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာသည် သူ့သားမရှိတော့ အိပ်သည့်အခါကျနော်ကို ဖက်ပြီး ခွအိပ်တက်တဲ့အဒေါ် ညဝတ်စွပ်ကျယ်ထဲက တင်းရင်းပြူထွက်ကျနေတဲ့ နို့ထွားကြီးကို သတိလွတ်ငေးနေမိတာကိုသတိထားမိသွားတာကစလို့ ဒါကိုအဒေါ်ကသတိပြုမိပြီး ဗိုက်ခေါက်ဆွဲ ခံရသလို ပုဆိုးအောက်ကတောင်နေတဲ့လီးကိုပါ အဲ့သည့်နေကတွေ့သွားပြီးနောက်ပိုင်း
"" သား လူပျို ဖြစ်နေပြီလား"" လို့ တိုးတိုးလေးမေးခဲ့ဖူးတဲ့အဒေါ်
အောကားခိုးကြည့်တာ သိသွားလို့ အမေလာလည်တဲ့အချိန်မေကို ကျနော် အောကား အောကားတွေကြည့်ပြီး အတက်ကောင်းတွေ သင်ယူနေတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့သူ
မဟုတ်တာတွေ စိတ်မကစားဖို့ ဆုံးမခဲ့တဲ့အဒေါ် အောကားထဲကအတက်ဆန်းတွေမြင်ပြီး လျောက်မလုပ်ဖို့ ပြောဖူးတဲ့အဒေါ်
အမေကို ကျနော်သားတစ်ယောက်လုံးရှေ့ထားပြီး အမေနောက်အိမ်ထောင်ဆေးခန်းလာပြတဲ့အကြောာင်း အဒေါ်သူငယ်ချင်းဒေါက်တာမက အမေကိုသေချာကြည့်ပြီး အမှန်အတိုင်းဖြေရမယ်နော် လိမ်ရင်ဆေးကုရလွဲကုန်တက်တယ် အမှန်ဖြေကြားလားဟု ၅၀ ကျော်ခန်ရှိဒေါက်တာမကြီးကပြောတာကြားရသည် ညည်းယောက်င်္ကျးဟာမှာ ဂေါ်လီ လုံးထည့်ထားတယ်မလား ထည့်တာကပုံမကျလို့ ညည်းဟာကိုထိခိုက်တာ ကြာပြီလားလို့မေးတာကြားရသည် ၃ ရက်လို့အမေဖြေသည် ညည်းယောက်င်္ကျားက ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူး ညည်းသွားနဲ့ သူ့ဂေါ်လီနဲ့ပွန်းလို့ယောင်တာဖြစ်မယ် ဟုတ်မှာပေါ့အတင်းထိုးထည့်နေတာ အဒေါ်မှ အမကလဲ ၃ ရက်ကို အဲ့လောက်ထိအလိုးခံရလား ဟုပြောတော့ ညည်းလင်နဲ့အတူတူထည့်တာတဲ့ နင်လဲခံရမယ်မပူနဲ့အမေကိုလှမ်းကြည့်ရင်း မျက်နှာ ဘယ်ထားရမှန်းမသိဖြစ်သွားသည် ခဏနေတော့ ဒေါက်တာက ဆေးခန်းခဏလိုက်ခဲ့ အတွင်းပိုးဆေးဖို့ ပြီးတော့ ညည်းအမျိုးသားဟာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့လိုက် မလိုအပ်ရင်မထုတ်ဘူး လူးဆေး နင့်ညီမဆီမှာ သူ့ယောက်င်္ကျား သုံးတဲ့လိမ်းဆေးအဆီဗူးလေးကမ်းပေးရင်း အ့ဒါပါးပါးနှံအောင်ပွတ် ပြီးလို့ မာထောင်မှပုံရိုက် ဟုတ်ပြီလား
ဟုပြောရင်း အမေကိုခေါ်က ပြန်သွားလေသည်
ဘာဖြစ်တာလဲလို့ အဒေါ်ကိုမေးတော့ အလိုးလွန်သွားလို့လေ မင်းအမေလဲ ခုထိမဝသေးဘူးထင်တယ်
ယခု blog လေးထဲရောက်လာတဲ့အခါကိုယ့်အဒေါ်ဖြစ်သူ နဲ့ ပက်သက်ခဲ့ဖူးသူအခြား အဒေါ်အရွယ် အမေအရွယ် အသက် ၄၀ + ကျော် အန်တီကြီးများ အိမ်ထောင်ရှိလျက်ခိုးကျွေးတက်သူ ဆွေမျိုးကအစပျိုပျို အိုအို ဆိုဒ်ကြီးများနှင့် ပက်သက်ခဲ့ဖူးသူ များတဆင့်ပြန်လည်မျှဝေလိုပါက jeep2lay.2lay@gmail.comသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်( မိသားစုအတွင်းပိုင်းနဲ့ပက်သက်ပါက ကြိုတင်အသိပေးပါရန် )
ကိုယ့်တွေ့ နှင့် အပြာအောဇာတ်လမ်း
အန်တီ ချို နဲ့ အမေ
ဒေါ်လေးနဲ့ တူတာဆိုလို့ တဏှာကြီး ရမက်ထန် တာပါပဲ
အဒေါ် နဲ့ တူလေး. Picture Window theme. Powered by Blogger.